Sida loo ciyaaro files wmv la VLC
Weligaa ma isku dayay ciyaaro ah wmv file kombiyuutarka adiga oo isticmaalaya VLC ah? Marka hore waxa wmv soo gudbiso? Soo gaabinta Tani waxay u taagan tahay Windows Media Video in ay diyaariyeen Microsoft. Microsoft Ujeedada ugu weyn ee horumarinta tani ay ahayd in ay sii qulquli codsiyada dhowr online. Wmv waa mid ka mid ah qaabab video riixo in aad ha loogu badalo files waaweyn galay files yar maamuli karo sida aad u ciyaaro video in your computer. Sida aad u ciyaaro qaab this aadan wax laga walwalo tayada video tan iyo markii ay la ilaaliyo.
Noocan ah qaab file, Windows Media Video , waa la akhrin karo ee ugu ciyaaryahan warbaahinta sida VLC, Windows Media Player, RealPlayer, MPlayer, Media Player Classic kaliya la magacaabo wax yar. Si kastaba ha ahaatee, Windows Media video ma akhrin karo on Mac haddii aad la ciyaaro VLC media player. Haddii aad tahay user Mac ah waxaan hubaa in aad wajahay dhibaatadan afaduna ahay, oo aad u malaynayso in aad computer waxaa burburay ama file wmv u kharribmay. Hey No, in xaaladduna sidaa maaha. Sababtu waxa weeye in wmv isticmaalo Microsoft codecs oo aan la nidaamka qalliinka OS X shaqeeyaan. Oo sidaas waa ku noqon karaan niyad jab ay u leeyihiin file wmv on Mac. Hadii ay taasi dhacdana ma waxaad fiirsan doontaa fiidyow in haddii aad isticmaalayso Mac? Warka wanaagsan waa in Wondershare ayaa u yimid inuu users Mac ay la Wondershare Video Converter Ultimate gaar ah u gargaartaan. Codsigan waa VLC kaaliyaha ugu fiican waa in aad leedahay.
Si aad u ciyaaro faylasha wmv aad Mac, waa in aad loogu badalo faylka si qaab kasta oo ay taageerayaan Mac. Wareejinta waxaa suurto adigoo isticmaalaya Wondershare Video Converter Ultimate for Mac . Codsigan xajisto tayada Video marka aad beddelid files ah. Ha la arko sida uu u ciyaaro ee files wmv on app taas dabadeed ayaa lagala soo version Mac ah.
1 Download iyo abuurtaan Codsiga aad Mac.
Waxaa laga heli karaa rasmi ah Wondershare goobta. Waxaa jira maxkamadda lacag la'aan ah ama aad u iibsan kartaa haddii aad leedahay, anagana ku filan oo lacag ah.
2 fur faylasha wmv on App ah
Waxaad dooran kartaa file wmv aad rabto in ay daawadaan, oo ag maraya soo Gudbiyay Menu, ka dibna riix on Dooro File. Dooranaysaa Media daaqadii Video jeclaystay.
3 Dooro qaab wax soo saarka oo ay taageerayaan Mac ah
Qaabab ayaa taageeray by Mac waa MOV iyo MP4 in la shaqeeyaa QuickTime . Sidaa darteed, riix mid ka mid ah qaababka Icon sida qaab wax soo saarka ah.
4 file wmv diinta si ay u bilaabaan ciyaaro
Ka dib dooranaya qaab faylka wax soo saarka hadda guji badhanka ah oo ku yaal dhinaca midigta hoose si loo bilaabo nidaamka diinta. Waa midabka buluuga ah. Dulqaad ilaa socodka hawsha oo idil waa dhameystiran yahay. Marka badaley ciyaari video la QuickTime. Sidee u xiiso badan waa kuma? Qasabno yar la yaab leh gudahood Wondershare Video Converter Ultimate for Mac aad hadda ka ciyaari kara faylasha .wmv.
Illeen codsigan waa qiimo degsado maadaama ay tahay in xal loo helo dhammaan daaqadaha Media Video files in aadan ka ciyaari karaa aad Mac isticmaalaya VLC.
> Resource > VLC > Sidee u ciyaaro files wmv la VLC?